Carbures inowedzera kune rimwe divi reAtlantic | Ehupfumi Zvemari
Carbures, imwe yeanonyanya kufungidzira kukosha kwemari yenyika, iri kuita misoro mazuva ano nekuda kwenhau dzinogona kupa nhungamiro nyowani kuquotation yemitengo yayo. Nekuti zvirizvo, iyi yakanyorwa kambani inosimbisa hukama hwake naPemex, hofori yemexico yeMexico. Kambani yehunyanzvi hweSpanish inyanzvi mukugadzirwa, mainjiniya uye kugadzirwa kwezvivakwa muzvinhu zvakaumbwa zvakawedzera nemwedzi minomwe chibvumirano chemakore maviri chakasainwa mu2015 naPetróleos Mexicanos, Pemex, yekusimudzira mapuratifomu uye zvimwe zvigadzirwa zvemafuta.
Semhedzisiro yekuwedzeredzwa kwechibvumirano, kumiswa kwazvino kwakagadzwa muna Zvita wegore rino, kunosanganisira kuwedzera kubhadharisa 83 mamirioni peso Makambani eMexico (3,5 mamirioni euros) yekambani yehunyanzvi mukati megore ra2018. Carbures chiteshi ichi kuwedzera kwechibvumirano nePemex kuburikidza nerutivi rwayo rweMexico, PYPSA, uye mabasa einjiniya anongogumira kumahombekombe emahombekombe uye emahombekombe emafuta ayo kambani yemafuta mexicana ine iyo North uye Maodzanyemba matunhu eMexico.
Kune rimwe divi, "kuwedzerwa kwechibvumirano ichi chiratidzo chakajeka chekuvimba nebasa rakanaka ratange tichiita kubva Pemex paakafunga kutanga kushanda neCarbures", anotsanangura mutungamiriri weCarbures, Rafael Contreras. Mupfungwa iyi, Carbures ndeimwe yeanotungamira mafambiro eaerospace nedziviriro chikamu muSpain. Kwete yakawanda kwazvo, kune rumwe rutivi, muhuwandu hwemakambani anoita mune iri bhizinesi chiitiko. Asi, kuvapo mune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo dze Kondinendi yeEurope, dzakadai seGerman neFrance yatakavakidzana nayo. Nemakambani akati wandei eaya maitiro akanyorwa pane eEuropean equities.
1 Carbures: bhizinesi mutsetse
2 Zvimwe zvinowedzera kupfuura capitalization
3 Iyo yakanyorwa pa0,30 euros pamugove
4 Inofamba nekukwirisa kwakanyanya
5 Inoshanda neiyi kukosha
Carbures: bhizinesi mutsetse
Chero zvazvingaitika, Carbures ikambani ine makore anopfuura gumi nemashanu ezviitiko seTier15 mune Aerospace maindasitiri uye kuzvidzivirira, kusvika padanho rekutora sechinhu chakakosha mukugadzirwa kwezvinhu zvinoumbwa nezvivakwa zvemabhizimusi mahombe nemakambani anoenderana neTier1 pasi rose. Carbures parizvino ikambani inogadzira zvikamu zvinoumbwa nenhamba yakawanda yazvino yendege nedziviriro ndege.
Parizvino, chikamu, senge rese sangano, chiri kushanda pachizvarwa chazvino che zvimiro zvakagadziriswa, Kubvumidza kugashira ruzivo munguva chaiyo yechiitiko chero chipi uye chehunhu hwechinhu kune akasiyana nharaunda. Imwe yemapurojekiti akasarudzika kuvakwa kweHyperloop capsule, iyo chitima inofamba ichitsvaga nekumhanyisa kwemakiromita angangoita chiuru nemazana maviri paawa.
Zvimwe zvinowedzera kupfuura capitalization
Kunyangwe zvese zvirevo zvekukunda zvinoitwa nekambani yenyika yekudzivirira, zvinoita kunge pizi pane zvakajairwa tsika dzekuenzana kwenyika. Hazvishamise kuti pane chiratidzo chinoratidza maitiro aya uye ichokwadi kuti mashoma akachengetedzeka anochinjaniswa zuva rega rega mumisika yemari yeSpain. Dzimwe nguva ne vhoriyamu isina musoro uye nenzira iyi hazvigoneke zvakanyanya kuti inogona kudzikiswazve munzira yakagadzikana uye yakaenzana. Iri pamusoro pezvose kukosha kweavo vanoonekwa se pizi uye kunyangwe zvingataure maneja avo.
Semhedzisiro yeaya akakodzera hunhu, hausi chikumbiro chemusika wekutengesa kuti uve nawo mune yakaderera kana zvishoma kugadzikana mari yekudyara. Pane chikonzero chekuti iwe unzwisise maitiro aya uye zviri pachena sekunge iwe une zvinopfuura kurasikirwa kukunda. Kunyangwe zvibvumirano zvechangoburwa uye nazvo zvairi kuyedza kukwezva huwandu hukuru hwevashambadzi vadiki nepakati. Chimwe chinhu icho chazvino manhamba kubva kumisika yemari chinoramba nenzira ine mukurumbira. Nekuti haugone kukanganwa kuti uri kutarisana nedambudziko rakawandisa pamusika wemari kunyangwe iwo mutsara webhizinesi unomiririra. Ichi ndicho chinhu chisingafanirwe kuenda chisingazivikanwe kubva panguva dzino chaidzo.
Iyo yakanyorwa pa0,30 euros pamugove
Nguva yasvika yekuti iwe uzive kuti mutengo wazvino wemusika chii uye iri kutenderera 0,30 euros pamugove. Chinyorwa chaicho mukati mekuchengetedzwa kunonzi kufungidzira kana mapizi uye izvo zvinotsanangura chaizvo zvinogona kuitika kwauri kana ukasarudza kuvhurira iyi kambani diki yakanyorwa mune imwe yechipiri indices equices. Nekuti zvirizvo, Carbures inosanganisirwa muiyo Imwe nzira Stock Market (MAB) iyo inotongwa nemamiriro ayo ekubvumirana. Uye kuti iri pachena kwazvo mukufamba kwakanyanya kusagadzikana mune ese hunhu hwakabatanidzwa mairi. Kusvikira pakuomesesa kushanda nemahunhu ayo sezvaunonzwisisa kubva pakutanga.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti kukosha senge Carbures vari zvinokanganisa zvakanyanya kubva kunzvimbo dzese dzekuona uye chero zano rauri kuzoshandisa kubva zvino zvichienda mberi. Nekuvakirwa pane zvinotarisirwa kwete pane chaicho bhizinesi uye izvo zvinogona kutungamira kumatengo ako kudzikira mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva. Usakanganwe nekuti unogona kuwira mukukanganisa kukuru kana iwe ukatora zvinzvimbo paukoshi uhwu mukati memavhiki anotevera. Hazvishamisi kuti iwe uchiri kugona kuve nerumwe rwuno pasi rwendo rwunogona kuita kuti iwe urasikirwe nemari yakawanda mukudyara.
Inofamba nekukwirisa kwakanyanya
Kana zviitwa zvekambani ino yekudzivirira zvakasiyaniswa nechimwe chinhu, imhaka yekusagadzikana kwavo kwakanyanya. Nekuti mukuita, inogona kuburitsa kusiyanisa mumitengo yavo kusvika ku5% kana kunyanyisa. Iko nemazita mashoma kwazvo, mutengo wekambani unogona kufamba mune imwe nzira kana imwe. Neichi chikonzero chaicho, varimi chete vane ruzivo rwakawanda mumisika yemari vanogona kuzvibata nehumwe hunyanzvi kuyedza kuita inobatsira kuchengetedza kwavo zvinobudirira.
Ehezve, hazvisi nyore kushanda pamwe nekambani iyi iyo parizvino yakanyorwa pane iyo Alternative Stock Market (MAB). Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoda yakasarudzika nzira iyo isiri vese vadiki nepakati varimi vanogona kupa. Iko kune njodzi dziripo mazuva ese mumutengo wako uye panogona kuve nemamiriro ezvinhu akaomarara kune wese munhu. Hazvishamisi kuti Carbures iri mukati meiyo yakasarudzika boka rekuchengetedzeka iro rinotengesa pazasi yeyuro yuniti uye izvi pachazvo zvinoreva zvinhu zvakawanda nezve hunhu hwakanyanya hweichi chengetedzo.
Inoshanda neiyi kukosha
Kubva pane imwe pfungwa, zvakakosha kuyera kuti ndeapi mabhenefiti ayo kukosha kwemusika senge uyu watiri kutaura nezvake unogona kupa. Nekuti inoratidzira akateedzana ezviratidzo zvekuti zvichave nyore kwazvo kuti iwe uzvione kuti zviite mari yako, hongu kana ichi chiri chako chikuru chishuwo. Pamusoro pekuti isu hatisi kubata neyakaenzana kukosha kukosha, senge Endesa, BBVA kana Inditex, kudoma chete mienzaniso mishoma. Chero zvazvingaitika, Carbures ichave inoonekwa neakakosha huwandu hwesipo.
Chekutanga pane zvese, ikambani yakanyanya kunyorwa kapu diki uye kubva pane izvo zvingakutorere iwe imwe nhanho yekupinda kana kubuda munzvimbo dzavo. Zvirinani pamutengo waungade kuita yekutenga nekutengesa mashandiro. Panjodzi yekusungirirwa pamutengo.
Zvirokwazvo hazvisi hapana bhenji yehurumende yenyika. Mune mamwe mazwi, misika yeSpanish yemusika inogona kukwira kwakawanda uye zvikamu zveCarbures zvinogona kudzika nesimba rakakura kana zvinopesana. Izvo hazvitungamirirwe nemaitiro emamwe maitiro pamusika unoramba uripo.
Ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda nemabasa avo, asi nechikonzero chimwe chete kukusiira ma euro mazhinji zviya. Mamiriro ezvinhu akaomarara angave asingakwanise kukubhadhara muzvirongwa zvekudyara zvauchazogadzira kubva zvino zvichienda mberi.
Iwe une muzvikwereti imwe nhevedzano yemastock values ​​ayo akadzikama kuve nawo mune yako portfolio kana zvirinani kuti dzikama munzvimbo dzavo. Pasina kuenda kumberi, mukati meyebhenji rekuyera remusika wevashambadzi wenyika, iyo Ibex 35. Zvinogona kuve zvinoshanda kutora zvigaro mune dzimwe nhengo dzayo.
Carbures 'bhizinesi mutsetse hausi wekufungidzira, asi kukura kwayo mumisika yemari. Izvi zvinoita kuti uve nekusahadzika kwakawanda kuziva kana zviri nyore kwauri kuti uzarure zvinzvimbo mukambani yemhando idzi.
Yakanga iri kukosha iyo makore apfuura yakanga iri mufashoni Asi zvaive zvisina basa uye humbowo hweizvi ndezvekuti parizvino haisi kutengesa pamusoro pe0,40 euros pachikamu. Ichi chokwadi chiri kukupa iwe inopfuura imwechete chiratidzo nezve izvo zvaunazvo pamberi pemaoko ako nekambani iyi.
Uye pakupedzisira, yeuka kuti iyi ndeimwe yeanodiwa tsika dzeiyo vamwe vanofungidzira mari. Iko kwavanoedza kuwana mari yakawanda munguva pfupi pfupi yenguva. Chinhu chisingawanzo kuwanikwa nguva dzose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Carbures inowedzera kune rimwe divi reAtlantic